Iyo software yekuverenga kuwanda kana kunonoka kwakanyanya mu roulette
Kunyangwe iwe uchinge watove girini tafura shark iyi software ye verenga kunonoka kunonoka ku roulette kana kubheja pamhepo kunogona kubatsira zvakanyanya.
Kunyanya kana ivo vatangi, roulette kana vamwe vanofarira mutambo vachiyedza akawanda masisitimu, pasina zvakadaro kuongorora a priori izvo zvipingamupinyi zvingamuka panguva yemutambo.
Mumwe wemibvunzo yekare ndeyekuti sei verenga iyo kunonoka kunonoka roulette iyo imwe chete nhamba kana yakapihwa mukana inogona kuburitsa.
Maitiro ekuverenga kunonyanyisa kunonoka mu roulette: kunonoka kunonoka kana hyper frequency?
Kune avo vanofarira kutamba vachipesana nekunonoka kwenhamba, iwo ehuwandu hwehuwandu, asi chero mhando yemutambo waunoda, nekuda Turbo Bet Calc, iwe unogona zvirokwazvo kuwana zano rekongiri reizvo zvaunotarisira kana iwe ukazviwana uri patafura yakasvibira.
Maitiro ekuverenga kunonyanyisa kunonoka mu roulette: ckushandisa sei Turbo Bet Calc
Paunenge uchinge watora pasi chirongwa ichi uye nekuburitsa zvinogoneka zviri mufaira, unozviwana uri pamberi pehwindo chete rechirongwa, riine zvinhu zvakasiyana izvo zvandichatsanangura ipapo.
Miedzo: ndiyo nhamba yekuyedza iyo chirongwa chinofanirwa kuita (mumufananidzo pane zviuru gumi);
Tranche Lenght: ndehurefu hwetanho imwe chete, mumufananidzo semuenzaniso isu tiri kukumbira kuongorora zviuru gumi zvematanho e100 spins imwe neimwe (saka chihombe chemamiriyoni gumi emipendero);
Hwerengedzo yeNhamba: ingave iri huwandu hwenhamba dzinoita mutambo watinoda kuongorora Semuenzaniso, kune French roulette iyi nhamba iri 37, yeAmerican roulette, sezvo paine zero zero, iri makumi matatu nemasere;
Bet Selection: ndiyo nhamba yezvinhu zvinoumba mukana watinoda kuongorora: kusara mune roulette munda, 18 yakaenzana nemukana uri nyore (Tsvuku / Nhema, nezvimwewo), 12 kusvika gumi nemaviri, 6 kusvika kune yechitanhatu.
Paunenge iwe waisa aya mashoma data, ingotinya pane bhatani START uye mirira nguva dzekugadzirisa, idzo dzinoenderana nesimba rePC yako.
Maitiro ekuverenga kunonyanyisa kunonoka mu roulette: eExport data
Nokusarudza iyo sarudzo Gadzira Rondedzero usati watanga kugadzirisa, iwe unozogona kutarisa rondedzero izere yemhedzisiro yematanho emunhu, ayo aunogona zvakare chengetedza mumavara fomati (txt) yechero ongororo inotevera, semuenzaniso neExcel.
Maitiro ekuverenga kunonyanyisa kunonoka mu roulette: akuongororwa kusingagumi!
Chinhu chinonyanya kubatsira uye chakasarudzika nezvechirongwa ichi ndiko kugona kusarudza huwandu hwezvinhu zvemukana wekuongorora.
Kana iwe ukafunga nezvazvo kwechinguva pamambure, pamwe pane gumi nemaviri ehuwandu hwenhamba zvirongwa zve roulette, asi ese iwo anongotarisa echinyakare mikana, nepo nekutenda ku Turbo Bet Calc semuenzaniso unogona kutarisa mafambiro uye kunonoka zvakare kwemukana ngatiti 'atypical' senge mapoka enhamba nomwe, 7 kana chero rimwe boka renhamba raunoda kuongorora.
Mukuvhara, ini zvakare ndinonongedza kuti, kugona kusarudza huwandu hwezvinhu zvinogadzira mutambo (Hwerengedzo Nhamba), hapana chinokutadzisa kushandisa Turbo Bet Calc zvakare yekuongorora mimwe mitambo isiri roulette.